စက်တင်ဘာလ 2018 |2၏စာမျက်နှာ 62 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
လူမှုမီဒီယာဗီဒီယို Internship-Youtube, Twitch-TV ကို
ရာထူး: လူမှုမီဒီယာဗီဒီယို Internship-Youtube, Twitch-TV ကိုကုမ္ပဏီ: နည်းပညာဂိမ်း Changer, LLC တည်နေရာ: Sacramento, CA အမေရိကန်ပို >>
ဗီဒီယို / မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Internship
ရာထူး: ဗီဒီယို / မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Internship ကုမ္ပဏီ: Next ကိုအဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာတည်နေရာ: မဲလ်ဘုန်းမြို့ FL အမေရိကန်ပို >>
အလွတ်တန်းလက်ထောက်အသံအင်ဂျင်နီယာများ - A2
ရာထူး: Freelance လက်ထောက်အသံအင်ဂျင်နီယာများ - A2 ကုမ္ပဏီ: RUN Studios ကတည်နေရာ: Redmond WA အမေရိကန်ပို >>
SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးတွင် stem အလုပ်အကိုင်အတွက်မတူကွဲပြားခြင်း Explore မှ
Los Angeles - SMPTE®၏ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ, အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံထားပြီး, သိပ္ပံအတွက် သာ. ကြီးမြတ်မတူကွဲပြားမှုများအတွက်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်, နည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာနှင့်သင်္ချာ (stem) ခွက်တဆယ်ယင်း၏လစဉ်အနည်းဆုံးအဖွဲ့အစည်း ဟောလိဝုဒ်အတွက်ကြာသပတေးနေ့အောက်တိုဘာ 11 များအတွက်စီစဉ်ထား, တွေ့ဆုံ။ "Studios က, ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, postproduction အဆောက်အဦနှင့်အခြားအလုပ်ရှင်များအတွက် ...
အကြီးတန်းအဆိုတော်များ၏လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်၎င်း၏ပိုက်လိုင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ VFX Legion Marks 5th နှစ်မြောက်
VFX ကို Legion of Honour အကျိုးရှိစွာ, အရည်အသွေးမြင့်ဆုံးမှအဆုံးတိုင်အောင်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Episode ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများနှင့်အင်္ဂါရပ်ဇာတ်ကားတွေပေးအထူးပြုသည့် LA ကစတူဒီယိုမကြာသေးမီကဆက်လက်၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်အခြေခံအဆောက်အအုံမှအကြီးတန်းအခွက်တဆယ်နှင့်ပွုပွငျပွောငျးလဲ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့်အတူ၎င်း၏ပဉ္စမနှစ်ပတ်လည်မှတ်သား ကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာပိုင်းရှုခင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်။ အဆိုပါတိုးချဲ့နှင့်အဆင့်မြှင့်နောက်ထပ်မျိုးစုံစီမံကိန်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်စတူဒီယိုရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့် ...
အဒ်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာ
ရာထူး: အဒ်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီ: အမြဲတမ်းတိုက်ဖျက်မည်ပေ Resort ကိုတည်နေရာ: Scottsdale AZ အမေရိကန်တစ်ဦးချွန်ထက်မြန်ဆန်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ငါ့ကိုချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရကူညီပေးဖို့ဖန်တီးမှုအကူအညီများလိုအပ်! အားလုံးသို့မဟုတ်ဤစာရင်းအချို့ကိုသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်. အတူ။ ပန်းသီးအတွက်တတ်ကျွမ်းသူတစ်ဦးဦး, အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာပန်းသီးနှင့်အတူဖန်တီးလိုက်ပါပြီကတည်းကအဓိက, စာမျက်နှာနှင့်နံပါတ်များနှင့်ရုပ်ရှင်လိုအပ် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် International ကုမ္ပဏီ: INTERDIGITAL comm Corp တည်နေရာ: Princeton NJ အမေရိကန်ပို >>
ရာထူး: ကုန်ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်ငါကုမ္ပဏီ: Plexus တည်နေရာ: Neenah WI အမေရိကန်ပို >>
2 ၏စာမျက်နှာ 62«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»